Indraindray mampihomehy ny tenako aho! | Martech Zone
Tsy maintsy milaza aminao aho ry olona… Heveriko fa ahy lahatsoratra farany dia iray amin'ireo nahafinaritra indrindra nosoratako. Toy ny anao tokony jereo amin'ny sariko ao amin'ny lohateny hoe, tena tsy dia manadino tena aho. Ary koa, taloha dia nanoratra kely momba ny eritreritro momba ny fandrefesana ny fahombiazanao amin'ny zavatra lazain'ny olon-kafa momba anao aho. Ny fahombiazan'ny bilaogy dia tsy azo refesina ivelany, fa ianao irery ihany!
Amin'izany dia mila miaiky aho fa nampifandray anareo rehetra aho. Te hahita ny fihetsiky ny mpamaky aho… sy ny tontolon'ny bilaogy… rehefa nanoratra ny lohateny mahatsiravina izay tsy azoko 'tsara kokoa ny bilaogiko noho ny bilaoginao'. Lela amin'ny takolaka tanteraka izany, saingy tsy maintsy hitako ny fihetsika. Tena nampihomehy! (Azafady… mampanantena aho fa hiara-hihomehy aminao aho fa tsy aminao!). Nisy ny olona nahatsapa ho ratsy ho ahy, nisy ny natehina tamiko, ny sasany nampitaha ny naotiny tamin'ny naotiko, ary ny sasany kosa nanasongadina fa tsy misy ifandraisany amin'ny hatsaran'ny bilaogy ny laharana.
Te ho hendry aho indraindray mahita fa ny fanehoan-kevitra… mametaka ny vilany hoy izy ireo. Angamba ny ampahany mahatsikaiky indrindra an'ity (manantena aho fa tsy izaho irery no hihomehy), ny lazan'ny fidirana ity dia nampiakatra ahy ho any amin'ny 70,178 amin'ny filaharana Technorati.
Noho izany, amin'ny maha mpivarotra ahy, heveriko fa zavatra roa no manondro azy.
Chris Baggott indray mandeha dia nilaza tamiko fa indraindray tsara ny eo afovoan'ny adihevitra ary ny fampiroboroboana ny valiny dia afaka manampy amin'ny fomba maharitra amin'ny paikadin'ny orinasa iray. Tsy midika hoe fanodikodinana… ny tiany holazaina fotsiny dia hoe fanararaotana fampirantiana ny entanao. Amin'ity ohatra ity dia heveriko fa nandaitra!
Indraindray ny fiasana fotsiny hoe manan-danja kokoa noho ny tena izy ianao dia afaka miasa. Io, angamba, dia fahamarinana mampalahelo izay azontsika ampiasaina amin'ny marketing. Lazao hatrany fa # 1 ianao ary mety ho indray andro any dia ho tonga ianao!
Angamba afaka roa volana dia hanao fanafihana mangingina aho ary hilaza fa izy no bilaogy # 1 amin'ny Marketing Automation ary ho hitako hoe aiza no misy ahy. Amin'izao fotoana izao anefa, faly fotsiny aho fa tsy namoy ny iray taminareo tamin'ny fidirako farany!
Ilay mpihaza voay, Steve Irwin novonoina tamin'ny faha-44 taonany